Madaxda dalalka hodanka ah ee G7 oo ka hadlay tahriibka Afrika - BBC News Somali
Madaxda dalalka hodanka ah ee G7 oo ka hadlay tahriibka Afrika
Image caption Trump ayaa aad uga soo horjeeday heeshka la doonayo in laga gaadho soo galootiga iyo isbedelka cimilada
Hogaamiyeyaasha dalalka hodanka ah ee la yidhaa G7 ayaa maalintii ugu dambaysay ee shirkooda kaga wada hadlaya dhibaatada tahriibeyaasha.
Madaxweyneyaasha Tunisia, Kenya, Ethiopia, Niger iyo Nigeria ayaa iyaguna ka qayb galaya wada xaajoodka ka socda magaalada Taormina ee gobolka Sicily ee dalka Talyaaniga.
Talyaanigu wuxu madashan ugu doortay in uu ku qabsoomo shir madaxeedka G7 si uu indhaha dunida ugu soo jeediyo duruufta dadka Afrikaanka ah ee isku soo biimeeya badda ee doonaya in ay galaan Yurub.
Madaxweyne Donald Trump ayaa la sheegay in uu diiday war murtiyeed muujinaya faa'idada dalalka hodanka ahi ka heli karaan dadka soo galootiga ah. Sidoo kale waxa la sheegay in uu diiday habka loo falkiyey erayada lagaga hadlayey ganacsiga iyo isbedelka cimilada.
Talyaanigu wuxu aad u danaynayaa in uu ku boorriyo dalalka ugu hodansan dunida in ay taageeraan dalalka Afrika si ay u kobciyaan dhaqaalahooda, si ay taasi u suurto galiso in ay hoos u dhacdo tirada dhalinyarada ka soo tahriibaysa qaaradda ee safarrada khatarta badan ee ay ku beegsanayaan Yurub iskugu soo biimaynaya.
Hase ahaatee, xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, oo ka qayb galaya shir madaxeedkaa ka socday Sicily ayaa BBC-da u sheegay in heshiiska halkaa lagu gaadhaa hir geli doono xataa hadii Trump diido.